Otu esi egbochi Windows 10 inyocha gị | Akụkọ akụrụngwa
Windows 10 pụtara nloghachi nke ụfọdụ àgwà kachasị mkpa nke sistemụ arụmọrụ a. Mmalite mbido ma ọ bụ arụmọrụ dị mma bụ ụfọdụ n'ime ha, ewezuga ihe njikọ amamihe dị n'etiti Windows 7 na Windows 8 kachasị mma n'otu mbipụta.
Ma mbata a enwewokwa nnukwu ọgba aghara na oge ahụ n'efu nke onye ọrụ nwere ezigbo oyiri nke Windows 7 ma ọ bụ Windows 8 nwere ike ịnweta nnweta Windows 10. Dịka ha na-ekwu, a naghị enye ihe n'efu n'efu n'efu, na ihe Windows 10 na-enye bụ n'ọnọdụ ịmara omume na ojiji nke onye ọrụ mgbe ọ metụtara PC gị mgbe inwere Windows 10 dị ka sistemụ arụnyere. Nke a pụtara nzuzo nke onye ọrụ.
Microsoft anaghị ezo ezo, mana na EULA na-eme ka ọ pụta ìhè na na oge ụfọdụ ọ nwere ike ịma ihe niile ị na-eme na kọmputa gị n'okpuru Windows 10, ya mere, a dọọla onye ọrụ ọrụ tupu oge eruo.
Maka ndi ahu, otutu diri, n'ezie a ngwá ọrụ dị ka DoNotSpy10 dị mkpa iji iji kpochapụ atụmatụ ndị ahụ niile na-agbaso ọrụ onye ọrụ, gụnyere ọchụchọ weebụ.
DoNotSpy 10 na-azọpụta anyị inwe gafere ndekọ aha, iwu na ozugbo na ohere ndị ọzọ iji gbanye ma ọ bụ gbanyụọ atụmatụ. Anyị nwere ike iji aka anyị mee ha, mana ọ bụghị anyị niile nwere mmasị ide iwu dị mgbagwoju anya ma tinye ndekọ ndekọ iji metụ ụkpụrụ.
N'okpuru ị ga-ahụ nke ọ bụla nhọrọ ka deactivate na nkọwa nke mere na a maara nke ọma na ọ kagburu ya.
Ihe ị nwere ike iwepu ya na DoNotSpy10
Nyefee Windows Upgrades: yigharia mmelite rue oge mmelite na-esote
Gbanyụọ nnweta na Ndepụta Asụsụ- Na-egbochi Windows ịkesa ozi gbasara ndepụta asụsụ gị
Gbanyụọ ma tọgharịa ID NJ: kwụsị ma tọgharịa NJ mgbasa ozi gị
Gbanyụọ ma tọgharịa Cortana: gbanyụọ Cortana wee tọgharịa ID Cortana gị
Gbanyụọ App Access na Akaụntụ Ama: na-egbochi ngwa ịnweta ozi akaụntụ gị (aha, onyonyo, wdg)
Gbanyụọ App Access na Kalinda: gbochie ngwa iji nweta kalenda
Gbanyụọ ịnweta ngwa na igwefoto: gbochie ngwa iji nweta igwefoto gị
Gbanyụọ ngwa iji nweta ozi ọnọdụ: ngwa ọdịnala anaghị enweta ozi ọnọdụ na akụkọ ihe mere eme
Gbanyụọ App Nweta Ozi: na-egbochi ngwa site n'ịgụ ma ọ bụ izipu ozi (ederede ma ọ bụ SMS)
Gbanyụọ ịnweta ngwa na igwe okwu: gbochie ngwa iji chịkwaa igwe okwu
Gbanyụọ App App na Redio: na-egbochi ngwa site na iji redio dịka Bluetooth ịnata na zipu data
Gbanyụọ Appma Ọkwa Ngwa: gbanyụọ niile ngwa ngwa
Gbanyụọ Ngwa Telemetry- Telemetry Engine ngwa soro aha ojiji nke windo sistemụ windo akọwapụtara site na ngwa
Gbanyụọ akpaghị aka Driver Nwelite: gbochie Windows na-akpaghị aka na-emelite gị ọkwọ ụgbọala
Gbanyụọ Windows na-akpaghị aka- Gbanyụọ mmelite Windows na-akpaghị aka (Pro na mbipụta naanị)
Gbanyụọ Biometrics--Gbaa mbọ ka ị ghara iji biometrics nbanye ma ọ bụrụ na ị gbanye nhọrọ a
Gbanyụọ enyere mkpọchi ihuenyo igwefoto: ọnọdụ a na - egbochi igwefoto gị ịrụ ọrụ na mkpọchi mkpọchi
Gbanyụọ knowmara m: Ntọala a na-egbochi Windows na Cortana ịmara otu ị si ekwu okwu, ụdị, na pịnye ihe. A na-anakọta kọntaktị, kalenda ihe, aka ọdịde, olu, na dee akụkọ ihe mere eme
Gbanyụọ Aka Datakekọrịta Aka Ọdịde: na-egbochi nbudata data nkeonwe na ịdekọ
Gbanyụọ nchịkọta Ngwaahịa: zipu ozi nke gbasara ngwa, faịlị, ngwaọrụ na ọkwọ ụgbọala na Microsoft
Gbanyụọ Ebe: na-ewepu atụmatụ metụtara ọnọdụ
Gbanyụọ OneDrive: gbanyụọ OneDrive
Gbanyụọ Paswọdu Na-ekpughere Button: gbanyụọ bọtịnụ na-ekpughe paswọọdụ
Gbanyụọ izipu ozi ederede: na-egbochi Windows iziga ozi gbasara otu esi pịnye Microsoft
Gbanyụọ sensọ: gbanyụọ njirimara ihe mmetụta
Gbanyụọ SmartScreen Myọcha maka URLs: na-egbochi nzacha SmartScreen site na ịlele URL
Gbanyụọ Nzọụkwụ edekọ- Na-edekọ ndekọ nke usoro onye ọrụ ahụ gụnyere ozi dị nro dịka ntinye keyboard. Datadị data ejiri mee mkpesa maka njehie
Gbanyụọ mmekọrịta na Ngwaọrụ: Na-egbochi ngwa site na ịkekọrịta na mmekọrịta ozi na ngwaọrụ ikuku na-ejikọtaghị na PC gị.
Gbanyụọ- Ọ bụ ọrụ ya maka ịnakọta ojiji data na nyocha iji zipu ya na Microsoft
Gbanyụọ Search Web: na-egbochi Windows Search ịchọọ ịntanetị
Gbanyụọ WiFi Sense: gbanyụọ WiFi Sense
Gbanyụọ Windows Defender- Ọ bụrụ na ị na-eji ihe ọzọ mgbochi spyware ngwọta, gbanyụọ Windows Defender iji chekwaa akụ
Gbanyụọ arịrịọ nzaghachi Windows: gbochie Windows ịjụ gị nzaghachi
Gbanyụọ Windows Media DRM Nweta .ntanetị- Na - egbochi Windows Media DRM ị nweta ịntanetị
Gbanyụọ Windows Update maka ngwaahịa ndị ọzọ- Gbochie Windows Update na ịnye mmelite maka ngwaahịa Microsoft ndị ọzọ
Gbanyụọ Windows Update Sharing: Na-egbochi Windows ịkesa Windows Update gị na .ntanetị.
Ọrụ ndị a niile nwere ike akara site na ngwa ọrụ n'efu, yabụ ị nwere ike ịhọrọ ihe niile ma ọ bụ ndị dabara gị nke ọma. Site na ndabara, ezigbo nchịkọta ha pụtara arụ ọrụ na ihe ị nwere ike ịgba mbọ hụ na Windows 10 anaghị atụ egwu nzuzo gị nke ukwuu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » software » Otu esi egbochi Windows 10 inyocha gị
Ihe a niile nwere ike inwe nkwarụ na nhọrọ Windows 10 "Nzuzo".
Mmemme adịghị mkpa ma o doro anya na e nwere ọtụtụ ndị na-ekwu na ha ga-egbochi ọnọdụ nledo nke Windows 10, ọbụlagodi ụfọdụ na-ekwu na ha ga-agbanwe mmelite Windows (?) Ka ha wee nwee ike ịrụ ọrụ nke ọma, n'echefughị ​​na ụfọdụ mmemme ndị a gbanwee Windows Defender dịka onye edemede ha mere ka ọ ghara ịmata ya dị ka Trojan (?).
Mma tinye a nkuzi ebe nhọrọ ndị a bụ kama ihe nke ndị dị otú ahụ dubious ọrụ.
Zaghachi na blur
Ya mere, nke ahụ ọ ga-gbanyụọ Telemetry na mmemme niile? Nnukwu akụkọ antivirus na-eme nchọgharị, ihe nchọgharị, egwuregwu na ihe ndị ọzọ na-ekpughe usoro m na-eji na nhazi ya. Akwa Ngwa Daalụ. (Mgbe ahụ, ha na-eme mkpesa na Windows na-enye Njehie ma ha adịghị edozi ya n'oge, ọ bụrụ na ha enweghị ike ịkekọrịta ozi iji dozie nsogbu, echela ihe ngwọta maka njehie sistemụ na enyemaka aka ọrụ ozugbo) Daalụ.
E nwere ọtụtụ narị ebe nrụọrụ weebụ na-etiku eluigwe maka mwakpo nke nzuzo nke Windows 10 na-emepụta na ndị ọrụ. Ihe anyị na-ejitụbeghị na ihe Microsoft n'onwe ya hapụrụ nke ọma kwuru.
Nkịtị ndị ọrụ na-ahapụ ịchọrọ imechi ọnụ ụzọ ma si otú a kpuchido nzuzo karịa ka Microsoft mechara ghara iresị ndị ọzọ ahụ ozi ahụ, nke bụ ihe ọ gbasara.
Ma biko, tupu ị kwuo na Windows na-enye njehie, ị kwesịrị ị gụọ nhọrọ ọ bụla ọ gbanyụrụ, ebe ọ bụ na imirikiti ya metụtara nzuzo.
Nke a bụ ihe ọ bụ gbasara nzuzo, ọ bụghị ma ọ bụrụ na Microsoft nakọtara ozi iji dozie nsogbu ma ọ bụ nye azịza maka njehie, nke ahụ bụ ihe izipu njehie bụ, ọ bụghị na ị nwere keylogger na-anakọta ihe niile ị pịnyere na keyboard, have ga-agabiga 16 peeji nke iji gbanwee nhọrọ nzuzo ma ọ bụ na njedebe ị ga-etinye ngwá ọrụ iji mechie ọnụ ụzọ maka ụdị iziga data niile.
Mgbe m pịrị na "budata doNotSpy10" OpenDNS na - egbochi ya ma kwuo, sị: "A gbochiri ngalaba a n'ihi iyi egwu phishing. ", Nke ahụ bụ" A gbochiri ngalaba a n'ihi iyi egwu phishing. "Na-achọpụta ya dị ka" pxc-coding.com ". Echere m na ọ ka mma ịhapụ ya
Alexis abụghị Trojan. Ngwaọrụ a sitere na Redmond Pie, blọgụ a ma ama, ma a ka nwere isiokwu ahụ!
Ricardo Gordillo Carbajal onye nhazi ihe oyiyi dijo
Ọ ga-adị mma ma ọ bụrụ na ọ mekwara otu ihe ahụ na ọrụ Google na ngwaahịa, ma ọ bụ tufuo Apple ugbu a. Ghọta mmadụ, ozugbo ị banyere n'ịntanetị ị ga-atụfu nzuzo gị kpamkpam. Ngwaọrụ eletriki ọ bụla nwere ọrụ ịntanetị ga-eziga data nkeonwe, ọbụlagodi ọnọdụ incognito.
Zaghachi Ricardo Gordillo Carbajal
Nsogbu dị na Windows bụ na ha agbanweela site na nke onwe ya na ihe ọ dị ugbu a. . Lee ihe.
Naanị ihe ha ga-enweta bụ na maka ihe ndị ọkachamara na-eji Windows 10 na maka ihe nzuzo ma ọ bụ nke onwe (onye ọ bụla nwere ikike nke nzuzo ya), Linux bụ azịza ya.
Ọ na-agwa m banyere deactivating Telemetry na otu ọrụ ya bụ iji nyefee akụkọ njehie Windows na ọ gwara m na amaghị m ihe m na-ekwu? Ọ ga-abụ ndị na-abụghị? Ma ọ bụrụ na ọ na-ezo aka na Ọnọdụ nke agbanyụrụ na nzuzo.
Ihe ndị na-akwakọba ozi na Windows 10 bụ:
Cortana (ọ ga-abụ nzuzu iji gbanyụọ cortana ma ọ bụrụ na ọrụ ya bụ iji nyefee ọdịnaya na ijikwa ọdịnaya dịka onye ọrụ ya si jiri ya meziwanye ọrụ ya)
Edge (nke a na-echekwa data nke data ma ị jiri ya ma ọ bụ na ọ bụghị ma kesaa ozi na cortana) (enwere ike kpochapụ oghere a na Ccleaner)
Ngwa Windows (ọrụ ya bụ ịnye anyị ihe ma ọ bụ kedu ka ịchọrọ ka m nye gị ihe ma ọ bụrụ na ịchọghị ịgwa ha na ọ masịrị gị? Echere m na nke a metụtara Cortana otu ihe ahụ)
Ọzọ na-asụpe nyocha (aha ya na-ekwu ya niile, ọ nwere ike inwe nkwarụ na Nzuzo)
Ihe ndị ọzọ bụ mkpesa ahụhụ Windows (ị maara ihe m chere banyere nke a)
Dịka m gụrụ n’otu Facebook oge ụfọdụ gara aga “ị kwenyere n’ezie na Microsoft ga-etinye ihe egwu ịnata ikpe maka izu ohi ozi nzuzo n’aka ndị ọkwa dị elu ma ọ bụ ụlọ ọrụ site na iji ozi ha aka ọjọọ? Ihe ọzọ bụ na mmadụ ọ na-amanye ndị gọọmentị Microsoft iji kpughee ozi ahụ maka ụfọdụ mmejọ nke onye ahụ yana dịka ụlọ ọrụ ọ bụla na-ahụ maka ọrụ ya kwenyere na ọ ga-etinye onwe ya n'ihe ize ndụ maka ịgba akwụkwọ maka mkpuchi? Echere m na data mmadụ agaghị enwe nchebe ma ọ bụrụ na ọ bụghị n'ihi na mmadụ kwenyere na ihe niile bụ mkpagbu nke onwe ya nakwa na ha chọrọ ịmara ihe anyị na-eme
Na na e wezụga obere mkparịta ụka ahụ, echere m na ibe gị dị mma ma baa uru.
(Ekwela ka onye ara dika m nye gi isi, ihe ndia bu okwu)
5 ufọt ufọt nso smartphones na-etu ọnụ nke batrị na price